Ungasakha Kanjani isithombe se-3D ngombhalo - uLucidPix
Ungasakha Kanjani isithombe se-3D ngombhalo
Ngokubuyekezwa kwethu kwakamuva kohlelo lokusebenza, abasebenzisi manje sebengakwazi ukwenza ngezifiso izithombe zabo ze-3D ngombhalo! Kulesi sikhala se-blog, sizokunikeza izinyathelo ngezinyathelo ukukusiza usebenzise ngokugcwele lesi sici esisha!
Isinyathelo 1: Guqula isithombe sakho se-2D sibe yi-3D
Vula uhlelo lokusebenza lweLucidPix bese ukhetha isithonjana seKhamera. Skrolela kwesokudla uze ubone i- “3D Photo”, lokhu kuzokhethelela ikholomu yakho yekhamera ongayikhetha ukuthi isiphi isithombe se-2D ofuna ukusilayisha. Ngenye indlela, ungakhetha isithonjana seKhamera ngakwesokunxele phezulu kwesikrini ukuthatha isithombe "bukhoma". Lapha, sikhethe i-Tower Bridge eLondon njengesibonelo (ukuvuma isithombe UNailia). Bese, khetha "Qalisa isithombe se-3D" ukuze ubone umlingo ukwenzeka!
Isinyathelo 2: Khetha isithonjana se- “T”
Khetha isithonjana se- “T” ekhoneni elingezansi kwesokunxele lesithombe.
Isinyathelo 3: Faka embhalweni wakho
Faka igama-ncazo esithombeni sakho noma lesilinganiso osithandayo ukwenza isithombe sakho se-3D siphume. Ithiphu: ungangeza futhi kwezinye i-emojis!
Isinyathelo 4: Yenza ngokwezifiso umbhalo wakho ngemibala ehlukene
Khetha kusuka kwimibala eminingi (kutholakala kuphela njengoMsebenzisi Ophezulu) ukushintshela ukubukeka kwe-3D Photo yakho!
Isinyathelo 5: Yenza ukulungiswa kwakho kokugcina
Dlala uzungeze ngokubekwa kombhalo wakho ngokuhudula ukuwuhambisa futhi uzame lokhu ukuthola ukubekwa okuhle kakhulu! Ungaphina umbhalo ukuze uguqule usayizi, uwenze ube mkhulu noma ube mncane (noma yini ihambelana kahle nesithombe sakho) bese usonta umbhalo ukuze ujikeleze. Bona isibonelo esingezansi sendlela esidlale ngayo ngokuzungeza umbhalo nombhalo wethu wokugcina we-3D Photo of London's Tower Bridge.
Inzuzo Yezithombe ze-3D Inkampani Yakho →← Ungawakha Kanjani amavidiyo we-TikTok ahlukile
Ungakuphatha Kanjani Ukufinyelela kwesithombe ku-iPhone iOS 14
I-Top 10 Best Landscape Photography ethathwe Abahambi Emhlabeni Wonke
Izithombe Zezilwane: Izeluleko Ezi-9 Zokudubula Okumangalisayo
Ungawugubha Kanjani Ukubonga Okuphephile Ngesikhathi SE-COVID
Amathiphu awusizo we-DIY Wedding Photography